CBD sy fahasalamana | Safidy fahasalamanao tsara indrindra amin'ny taona 2020
CBD sy fahasalamana
CBD sy tombontsoa ara-pahasalamana
CBD sy fananana mampitombo ny fahasalamana
Matetika nanjavona ny fironana lamaody, fa eto kosa ny CBD hijanona. Raha ny marina, ny rongony dia nampiasaina nandritra ny an'arivony taona maro tamin'ny tanjona samy hafa, indrindra ny fanafody. Mba hanomezana hevitra anao, ny fiantsoana voalohany ny fampiasana rongony dia nanomboka tamin'ny 2300 talohan'i JK, tao amin'ny boky sinoa antsoina hoe Shu King. Nampiasain'izy ireo izy roa hanamboarana tady sy akanjo ary hitsaboana rheumatism ary fanaintainana mafy amin'ny fadimbolana. Ny zava-bitan'ity zavamaniry ity dia tsy zava-baovao.
Na dia miharihary aza fa ny CBD amin'izao fotoana izao dia mandalo fotoan'ny famirapiratana faran'izay betsaka, tianay ny hieritreritra fa mitranga izany satria, tamin'ny farany, ary rehefa afaka taona maro, ny fampahalalana mazava sy mazava momba an'io singa amin'ny zava-maniry rongony Sativa io dia misy ankehitriny. Ny fitomboan'ny fandalinana izay midera sy manamafy ny tombotsoan'ity singa ity, ary ny famoahana azy ireo, dia tsy isalasalana fa nanampy tamin'ny fanamafisana izay efa niahiahy olona maro: CBD dia misy tombontsoa ara-pahasalamana maro.
CBD na cannabidiol dia cannabinoid hita ao amin'ny orinasa rongony. Amin'ireo cannabinoids zato mahery misy ao amin'ny rongony Ny zavamaniry Sativa, izy io no singa be mpandinika indrindra, miaraka amin'ny hery fitsaboana lehibe indrindra ary izay zakan'ny rafitray indrindra. Tompon'andraikitra amin'ity fandraisana ity dia ireo mpandray sela cannabinoid hita ao amin'ny sela manerana ny vatan'olombelona, ​​indrindra amin'ny ati-doha sy ny hery fiarovan'ny vatana. Ny fanjifana CBD dia mahatonga ny mpandray sela cannabinoid hihetsika sy hamatotra ny velaran'ny sela, mitarika rafitra endocannabinoid mavitrika sy salama kokoa.
Ary, ankehitriny, manontany tena ianao hoe inona ny rafitra endocannabinoid ary inona no ilana azy? Na dia rafitra manahirana mahavariana aza izy ity, azontsika atao ny mamintina fa ity rafitra ity dia voarohirohy amin'ny fomba fizika isan-karazany, toy ny fifehezana ny fahatsapana fanaintainana, ary koa ny fiasan'ny aretim-po, ny gastrointestinal ary ny aty, izay mahatonga an'io CBD io sy ny fahasalamana mifandray akaiky.
Fa izao, andao hiresaka momba ny zava-misy. Ahoana no hanampian'ny CBD ahy? Ny fampiharana ara-pitsaboana an'ity akora ity dia maro sy tsy fantatra. Voaporofo ara-tsiantifika fa mampihena sy misoroka ny fivontosana sy ny maloiloy, diabeta, tsy fahitan-tory, aretin-tsaina taorian'ny post-traumatic, schizophrenia, arthritis rheumatoid, aretim-po kardia, antipsychotic, anxiolytic, ary na analgesika aza, manohitra ny fanaintainan'ny neuropathique sy ny hozatry ny hozatra, izay fanao mahazatra dia sarotra kokoa ny mitsabo amin'ny fanafody hafa, eny fa na dia ny fanafody aza. Izy io koa dia fitsaboana mahery vaika ho an'ny androbe, sclerosis marobe, ary koa hiadiana amin'ny fahaverezan'ny fahazotoan-komana. Ankoatr'izay, tsy toy ny THC, CBD marobe dia tsy vatan'ny psychoactive, ny mifanohitra amin'izay, misy effets mampitony sy mampitony. Mampino marina?
Mety mieritreritra ianao izao hoe aiza no ahitanao ireo vokatra amin'ity karazana ity? Betsaka ny orinasa nanomboka ny asan'ny CBD saingy vitsy no afaka manome fahafaham-po ny haavon'ny fangatahan'ny mpanjifa. Tsy isalasalana fa ny Red Emperor CBD dia iray amin'ireo mpaninjara CBD azo antoka. Orinasa tanora iray izay ny vokatra dia mihoatra lavitra noho ny andrasan'ny olona rehetra mahay manavaka ny vokatra antonony sy avo lenta. Na amin'ny tsiro na amin'ny fofon'ireo tsimoka matanjaka dia azonao atao ny mankasitraka ny fikolokoloana ny fambolena hemp indostrialy, araha-maso tanteraka ary izay toe-piainana tsara indrindra noforonina hahazoana vokatra premium. Miaraka amin'ny 0.3% THC ambany noho ny karazany rehetra, ny vokatra CBD Emperora Mena rehetra dia avy amin'ny fambolena hemp indostrialy voajanahary.
Ny menaka CBD avy amin'ny Red Emperor CBD dia mety ho vahaolana tsara ho anao. Fampiharana tsy manam-paharoa, ity menaka feno spektrum ity dia afaka manampy anao hatory ary, noho izany, mankafy fitsaharana milamina kokoa, somary sarotra tanterahina amin'ny dingana adin-tsaina na fanahiana. Izy io koa dia tena mandaitra amin'ny fanaintainana ary mety ho solon'ny mpanafaka fanaintainana. Anisan'ireo fampiharana efa voaporofo, arahi-maso matihanina sy amina fatra manokana, naseho hanatsarana ny kalitaon'ny olona mijaly amin'ny Parkinson sy epilepsy.
Araka ny hitanao dia tsy ilaina ny mampiasa fanafody mahadomelina misy vokany manimba. Azonao atao ny manandrana ny CBD ary hihatsara ny fahasalamanao. Fahendrena ny natiora ary manome antsika izay rehetra ilaintsika amin'ny fahasalamantsika sy ny fiainantsika isika, maninona raha manararaotra izany?
PreviousPrevious post:Inona ny solika CBD? | Vokatra tsara indrindra ho an'ny 2021ManarakaNext post:Fikarakarana hoditra amin'ny CBD miaraka amin'i Sam Cheow, Laurel Makeup VP teo aloha